Semt Uzmanı: 2017 ee 5 Habsami-u-socodka Dammaanadaha Dammaanadda
Nidaamyada xisaabeed ee digital-ka ah ee ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaarka ah iyo beddelaadyada kala duwan. Isbedelka ku dhaca isbedelka iyo marmarka qaarkood. Dhaqdhaqaaqa shaqada, evrimin iyo evrimin, ayaa badanaaba isbedelaya haba yaraatee nolta halista kaliya ee wadashyada.
2016-ka digital kaymalar, marxaladda dhaqaalaha ee dib-u-habeynta sii wadi jirtay. Horumarinta khadka telefoonka ee telefoonnada, si aad u heshid. Pinterest iyo Snapchat sida goobaha kor lagu soo qaado iyo sii wadkuliyayaashu - time management software. Horumarinta horumarinta, kor u qaadida adeega digital consumers ay tarjumayaan
Inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ku shaqeynayaan, dhowr sano gudahood gudahooda wax ka bedelaya - cusub oo ay sugayaan iyo ku cusbooneysiinayaan fursadaha ku habboon, Lose ama Adapt: ​​our situationumuzda bu deyişin doğru olduğunu kanıtlandı. Taas awgeed, mar kasta oo mustaqbalka ah waxa ay ka horimaanayaan ufukmek ufuk on duruyoruz.
Semalt , Hogaamiyeyaasha ugu sareeysa Nicolas Chaykovskiy, ayaa bilowgii 2017-kii ku guuleystey saddexdii sano ee ugu dambeysay, ka dib markii ay soo saartey digital marketinglamen,
1. Mobil, Maalcel Tüketimi Bilgilendiriyor
Xarunta Cilmi-baarista Pew by US vatandaşlarının 77% akıllı telefon sahibi bir anket ile cep telefonlarının kullanımı yaygınlaştı. Sanadkan Isticmaalayaasha akademik akademik müşterilerin en çok tercih edilen alışveriş ortağı olduğunu gösteriyor.
Aklmarka telefoonkana waa la baarayaa, alaabadana waan ku caawin karaa, waxaanay isticmaali kartaa tarbiyadii caawinta alaabta nolol maalmeedka ku darsaday.
2. Canli Video Streaming Sürekli Tartanka Tartanka
2015 ee Meerkat, canli bir akışlı uygulama başlatıldı ve yenilik halindeydi. Hal sanno ka dib, ayaa boggeeda Facebook, Twitter, Instagram iyo YouTube ay kala qaybsadeen.
Canlı akış, müşterilerin deneyimini zenginleştirdiği için markalar ve pazarlamacıları diğer platformlara kıyasla rakip bir avantaj sağlar. Wanaagsan lagama maarmaanka u ah horumarinta iyo ka hor inta aan la helin isbeddelka saameyn ku yeelashada.
3. Weriyeyn Ku Saabsan Qalabka Guud (20)
Dareemo weyn, oo ah mid si aad ah loo isticmaalo oo ah mid muhiim ah. Amazon, Spotify iyo Netflix, si aad uqalabee shaqeysi si aad u weyn si aad u soo wanaagsanaanaya shirkadaha waaweyn ee tusaale ahaan. Marka la eego kor u qaadista iyo kor u qaadida ama ujeedada loo baahan yahay,
Farsamooyinka cusub ee shirkadaha isgaarsiinta waa in ay ahaato mid ka mid ah qodobada muhiimka ah. Automasyon, oo hadda ah suuqa kala iibsiga si ay u isticmaalaan.
5. Xayeysiiska Dhexdhexaadinta, Muuqaalka Pazarlamasını Artırır
Muuqaalka suuqa, xun iyo wanaagga kufsiga ee aasaasay. Aqoonyahanada tiro badan, kuwa cusub iyo kuwa isticmaala noocyada kala duwan ee lagu soo bandhigay si ay u noqdaan kuwa udub dhexaad u ah horumarinta istaraatiijiyada horumarinta.
Waalidiintu waa inay noqdaan kuwa ugu habboon ee ku habboon. Shuruudaha ugu sarreeya ee lagu kalsoonaan karo iyo kor u qaadista, kala iibsiga fursadaha kala duwan ee suuqa kala iibsiga si aad u weyn tahay